अत्यावश्यबाहेकका सबै सेवा बन्द हुने गरी आजदेखि भदौ ५ गते मध्यरातसम्मलाई कडा निषेधाज्ञा – List Khabar
Home / समाचार / अत्यावश्यबाहेकका सबै सेवा बन्द हुने गरी आजदेखि भदौ ५ गते मध्यरातसम्मलाई कडा निषेधाज्ञा
admin August 13, 2021 समाचार Leaveacomment 179 Views
आगामी भदौ ५ गते मध्यरातसम्मलाई निषधाज्ञा थप गरिएको छ । अत्यावश्यबाहेकका सबै सेवा बन्द हुने गरी आज बिहान ५ बजेदेखि निषेधाज्ञामा कडाइ गरिएको हो ।
बाग्लुङमा यसअघि गत मङ्गलबार जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले सङ्क्रमणदर बढेको निष्कर्षसहित निषेधाज्ञा कडा बनाउने निर्णय गरेको थियो । केन्द्रका संयोजक एवं निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गौतमद्वारा जारी निषेधाज्ञाको आदेशअनुसार सबै खाले सार्वजनिक÷निजी यातायात बन्द भएका छन् ।
Previous सुन चाँदी किन्दै हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् कति छ आजको मूल्य ?
Next पानी चलाउँदा किन यसरी चाउरिन्छ हात-खुट्टा ? यस्तो रहेछ कारण